တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ၄၁ မြစ်တစင်း ...
Posted by မေဓာဝီ at 7:10 PM
Happy 41st birthday Ma May.
ကဗျာလေးက တိုတိုတုတ်တုတ်၊ ထိထိမိမိလေးပါလား။
နှင်း ( နှင်းနဲ့မာယာ)
မြစ်တစ်စင်း.. နှစ်ပေါင်း ရာကျော်အောင်.. စီးဆင်းနိုင်ပါစေ...
Happy birthdayama. Wishing you many happy returns.
ဟိုး..တောင်တန်း တစ်ခုခုပေါ်ကနေ မြစ်ဖျားခံချင် ခံခဲ့လိမ့်မယ်၊ အစမှာ ကျောက်တုံးကျောက်ခဲတွေကို ပွတ်တိုက်ချော့မြှူ ခဲ့တာလည်း ရှိကောင်း ရှိမှာပေါ့၊ သောင်ထွန်းစေမယ့် အရာတွေ၊ မြစ်ကျိုးအင်း ဖြစ်သွားစေမယ့် အရာတွေကို ရှောင်ကွင်းရင်း မ'ကော' သွားအောင် ဉာဏ်ပညာအလင်းနဲ့ သူ စီးဆင်းခဲ့ရ ပေလိမ့်မယ်..၊
သူ့ကို လိုလား/အပ်တဲ့ အကြေအရပ်အတွက် မြေသြဇာတွေ၊ မြေဆီမြေနှစ်တွေ တဝကြီး သယ်လာရင်း အဲဒီမြစ်တစ်စင်းဟာ ပီတိတွေနဲ့ လက်ဖြာနေခဲ့မှာ အသေအချာပေါ့၊ မမေရေ... ပင်လယ်အထိ ရောက်အောင် ကျန်းမာစွာ စီးဆင်းသွားနိုင် ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းမိပါရဲ့...။
လောကကောင်းကျိုးအတွက် တက်ကြွစွာ စီးဆင်းနိုင်ပါစေ။
8/21/2012 1:12 AM
8/21/2012 2:31 AM
Happy Birthday ညီမ...း)
8/21/2012 4:45 AM
ံစိတ်လက်ချမ်းသာ သော မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ မမေ
8/21/2012 9:21 AM
မြစ်တစင်း ထာဝရစီးဆင်း ပါစေ .. မြစ်တစင်း ဘေးမှာ ရှိနေခွင့် ရတဲ့အတွက် ဒီနေ့လေး ကို ထာဝရ မမေ့ပါဘူး..
ဆုတောင်းပေးကြသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ...
အားလုံးလဲ ပျော်ရွှင်အေးချမ်းတဲ့ ရက်များကို ပိုင်ဆိုင်ရပါစေလို့ ....
8/21/2012 12:20 PM
ငြိမ်းချမ်းတဲ့ မွေးနေ့တွေ အများကြီးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေမမေရေ.. ဘလော့တွေလဲ မလည်ဖြစ်တာ ကြာသွားလို့ မတွေ့တာလဲကြာနေပြီ။ ရန်ကုန်မှာလဲ မတွေ့ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ မမေနဲ့ ရက်ပိုင်းပဲကွာပြီး နှစ်တွေ လတွေ အတူတူစီးဆင်းခဲ့ကြတဲ့ မြစ်တစင်းမှန်း အခုမှသိရတယ်။ ဆက်လက်စီးဆင်းကြအုန်းစို့နော်...း)
ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့မင်္ဂလာရက်မြတ်လေးပါ မမေရေ။
ဖေ့ဘုတ်မှာ May Nandar ဆိုတာ မမေလား? တီတင့်ထဲမှာ မရှိသေးဘူး မနေ့က ညီမရွှေစင် နှုတ်ဆက်တာမြင်လို့ မေးချင်နေတား)။
8/22/2012 3:30 AM
ငြိမ့်ညောင်းစွာ စီးဆင်းနေပါစေ နေ့ရက်စဉ်တိုင်းပေါ့...။
8/22/2012 8:24 AM
8/22/2012 12:06 PM
မွေးနေ့ မှသည် ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာနဲ့စာတွေအများကြီးရေးပြီး စီးဆင်းနိုင်ပါစေ..ကဗျာလေးရော၊ ဓာတ်ပုံလေးရော ကြိုက်တယ်..
8/23/2012 12:32 AM
8/23/2012 3:38 AM
8/23/2012 3:39 AM
၀မ်ဆွေ့ဝမ်ဆွေ့ ၀မ် ... ၀မ် ... ဆွေ့
... သက်တော် ရာကျော် ရှည်ပါစေ ...း)
8/25/2012 1:44 PM
အသက် ၄၀ မှ ဘ၀ စတယ်လုို့ အများစု ပြောကြတဲ့ မြန်မာစကား ရှိပါတယ်။ ဘာကုိုဆုိုလုိုတာလဲလုို့ အသက် ၄၀ ရောက်တဲ့ အကုိုကြီး တစ်ယောက်ကုို မေးဘူးတယ်။ အကုိုကြီးက အသက် ၄၀ ရောက်တော့ လောကဓံလေးတွေကလဲ စုံလာတယ်၊ သည်းခံသင့်တာကုို သည်းခံတက်လာတယ်။ နားလည်း ပေးသင့်တာကုို နားလည်ပေးတက်လာတယ်။ ခွင့်လွတ်သင့်တာကုို ခွင့်လွတ်တက်လာတယ်။ တုိုတုိုပြောရလျှင် လောကဓံ အဝှေ့ ခံနုိုင်လာပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ နေတက်လာတာ ကုိုပြောတာ ဖြစ်မယ်လုို့ အဲဒီ အကုိုကြီးက ပြောဘူးတယ်။ မ မေဆီက "ခုတော့ ကုိုယ်ရေးတဲ့ အမှန်တရားဟာ သူတဖက်သားအတွက် ထိခုိုက်ရင်... ဆုိုတာမျိုး တွေးနေမိပြီး၊ ....." ဆုိုတဲ့ စာလေး ဖတ်ရတော့ စိတ်ထဲ တော်တော် အေးချမ်းမှု့ဖြစ်မိပါတယ်။ မ-မေ ၄၁ မွေးနေ့မှာ ပုိုချမ်းပါစေ... (မောင်ကြီး)
9/03/2012 11:44 AM
မွေးနေ့တွေများကြီးကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ...